Olnud na-agbagharị ajaveeb, kus ei leidu muud, kui nae-agụ akwụkwọ gị okwu, ọkachasị ndị nkwado gị kachasị akwado.
Ọ bụ ezie na ọdịnaya ọhụrụ gị nwere ike ịbụ maka oge ụfọdụ na ọbụna ndị nleta oge niile, ndị na-agụ akwụkwọ na-eguzosi ike n’ihe na-achọ mgbe niile maile ika niịi nika maka ihe nd na ha tụkwasịrị gị obi dị ka ikike na nchịkọta gị na ha na-echekwa banyere gị n’onwe gị.
N’d ndị a na-agụchi obi na ndị na-akwado nkwado bụ ndị ị na-enwe mmekọrịta chiri anya, n’ihi na:
Kuna meil pole ühtegi saiti, pole blogi amalite
Ha na-enye aka na na blogi gị n’ọtụtụ ụzọ, sait na ntụnye echiche maka akwụkwọ ndị ọbịa
Ha nyere gị nkwado obi na / ma ọ bụ ego iji jide gị na blogi gị mgbe ị chọrọ ya
Ma ọ bụ n’ihi na ị polnud ike ịmepụta
Obere akwukwo nke ndi ‘ndi n’eso uzo’ nke inwere ike inye aka tolite niche gi
Otu ìgwè ndị beeta na-agụ iji nyochaa ọrụ gị na-agbasaghị
Ihe kpatara nike ike ụbụ otu puku na karịa, mana ihe doro anya bụ na ndị na – agụ akwụkwọ a adịghị ka ndị na – agụ akwụkwọ oge niile, na –adịghị ka ndị na – edebanye aha oge niile – ha dị gị, ma ọ bụ ezinụlọ gị.
2 Kedu on lihtsalt ịmepụta Akwụkwọ Akụkọ Ndị Akaụntụ?
2.5 5. Saatke e-kiri na-enye mmekọrịta enyi
2.9 Ma olen lihtsalt ichi akwukwo akwukwo akwukwo di iche iche abughi onye Elitist
3.1 Na MailChimp: ärge unustage, et teil on ikooni
4.2 Gbapụta ma ọ bụ na ọ bụghị, mine nwerela Nhazi Gị
N’okwu ndị dị mfe, akwụkwọ ozi ọma ma ọ bụ nke kachasị elu bụ akwụkwọ ozi pụrụ iche – ma ọ bụ ndepụta nke akwụkwọ akụkọ gị – edepụtara kpọmkwem nad n nd nmma nkịm, nak nd akmma, nak nak ndị na-akwado onyinye gị pụrụ iche, gị na / ma ọ bụ uto nke oru gi.
Maka odidi jaa, akwukwo akuko edeputara bu nke nzuzo na ndi mmadu kpoo oku, nke na na ekwughi n’ihu oha – nke a na – egbochi ndi mmadu emeghi onyinye puru iche site na ntinye aha ya. Enwere ike ịnwe ike iche na nke a, mana iwu izugbe nke isi okwu bụ na akwụkwọ akụkọ agụmakwụkwọ bụkwa nke zoro ezo, nke ndị otu ya maara, dị ka klọb nzuzo.
Mgbasaozi Mgbasaozi akwukwo ozi na Digitaalkvartalid, mis on tuntud:
Iji chekwaa ụda olu ya na mkparịta ụka chiri anya, Mgbasaozi Mgbasaozi na-anọgide na-akpọ òkù-naanị akwụkwọ maka ndị nwere ihe dị oké ọnụ ahịa. Ọ bụrụ na ị ei ole mmasị ịnara ya, biko jụọ onye na-edebanye aha ugbu a ịhọrọ gị ma ọ bụ rute onwe m maka ichebara echiche.
Ihe nzuzo na – enyere aka izere ‘ekworo’ site n’aka ndị na – agụ akwụkwọ oge niile na ndị debanyere aha, ndị nwere ike iche na a na-ahapụ gị n’agbanyeghị na ị ga – enwe ezigbo ihe kpatara eji mee jah.
A ọkọlọtọ ala bụ akwụkwọ akụkọ gị mgbe niile, ọdịnaya agbakwunyere dịịrị ndị debanyere aha nke blogi ma ọ bụ weebụsaịtị na nišš ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Mgbe ibido akwụkwọ akụkọ (ọkọlọtọ), ị na-eche ya na ntanetị nke ndị na-ege gị ntị nke na-akwụsi ike n’ihe ma nwee mmasị n’ihe ị ga-enye karịa ndị na-agọ akwụk eleta otu oge ma ọ bụ na-eleta mgbe niile ma ị chọghị inweta. ‘agbakwunyere’.
Dịka ọmụmaatụ, kwuo na-agba ọsọ na blogi na blogzụ ụmụ. Na mgbakwunye na ọdịnaya ị na-enwe kwa ụbọchị, ị ga-achọ ka ị na-emeso ndị na-agụ akwụkwọ kachasị eguzosi ike n’ihe na akwụkwọ akụkọ ebe ị na-ekere òkhe ndụm, ndụna. Nke ga-abụ akwụkwọ akụkọ gị.
Ugbu a, kwuo na mmadụ iri na abụọ n’ime ndị a debanyere aha gị nyere gị aka inweta ihe ndị na – adịghị mkpa, nyochaa ọtụtụ ndị nne na nna ma jikọọ gị na nnukwu ụdịụasaụụịịwewewewewewewewewe (nkewapụrụ site na oge gị) maka obere ìgwè a ndị mmadụ na ndị enyi, ka ha nwetahere the iche iche nke nnụnụ ma ọ bụ nke mbụ, zaa ajụjụ ndị ọzọ na-esiri ike ma hazie nzukọ.
Kedu on lihtsalt ịmepụta Akwụkwọ Akụkọ Ndị Akaụntụ?
Võib-olla pole enam midagi sellist, nagu kreetara, kui me kpatara ị ga – eji nye akwụkwọ akụkọ dị oke mkpa ụfọdụ echiche siri ike – ma ei olnud enam sama, nagu gaghị adabara ikpe gị, mana ị gaghọ, ama ruo nbebe.
Ịeie ike ịchọta ndị ọkasị gị pụrụ iche ị na-arụrịrịrịrịrịrịrị mmekọrịta na ụfọdụ ọdịnaya pụrụ iche ị maara na ha ga-achọ ma nwee ekele karịa ọ.
Sam Williamson Nke Nsogbu Ndị Nchịkọta Ubi na-akọrọ ya ihe just ọ ga-eji malite akwụkwọ ozi ọma nahe he pụtara ịkọ ezigbo mmekọrịta ya na ụfọdụ ndị na – agụ akwụkwọ:
A bụ m onye na – ede blọgụ, amalitekwara m iwu ndepụta email n’afọ gara aga, mana enwere m ụdị kọntaktị na saịtị m kemgbe m bidoro. Enweela m ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ m kpọtụrụ m kemgbe ọtụtụ afọ na azụlitela mmekọrịta mụ na ọtụtụ n’ime ha, ọbụlagodi na-agwa ha okwu banyere nrụrụ aka ha na Skype. Yabụ mgbe oge ruru iji wuo ndepụta email, ọ dị njọ ịgụnye ndị na-agụ akwụkwọ ndị mụ na ha na-agwa okwu kemgbe ọtụtụ afọ. Ekpebiri m ịdepụta ndepụta email dị iche maka ndị na-agụ akwụkwọ m na-eguzosi ike n’ihe, nke gụnyere ozi ịntanetị ụbọchị ọmụmụ na ozi ịntanetị nkwado ole na ole. M ga-ezigakwa ozi ịntanetị na-arịọ ha maka nzaghachi eziokwu ma ọ bụrụ na m nwere echiche ọhụụ maka blọọgụ. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọzọ na-agụ akwụkwọ m na-enweta ozi-e nkwado ole na ole na ọdịnaya dị obere na-arịọ maka nzaghachi. Achọpụtara m na usoro a na – enyere ndị na – agụ akwụkwọ m na – eguzosi ike n’ihe aka ịghọta na ha bara uru ma na – enyere aka na ntanetị nke blọgụ m, ma ka na – enye ndị na – agụ akwụkwọ m ndhe na ọzọ ihe bara uru.
Ọdịnaya pụrụ iche ị ga – eji ihe edepụtara gị ga – adịrị gị na mkpa ha, mana n’ozuzu ị null ikehọrọ maka mmelite na ọdịnaya nke ị na – ebipụtaghị ma ọ bụụụụụ – -, ebbegh ọ bụ beeta ịchọrọ nzaghachi ha na Ha ghọtara gị karịa ndị na-amaghị gị nke ọma. Knowmara na ị chọrọ ka ha nwee ọdịnaya kachasị mma ị mepụtara maka ịde blọgụ gị.
Ahụmịhe m nwere na – agbapụ akwụkwọ akụkọ dị iche, nke nwere aka na – emetụ aka na ndị nwere ogologo oge na ndị na – akwado otu n’ime ọrụ akụkọ ifo, Robocity World – ndị a mụ ndị egwure n’oge ogologo oge na – egbu mgbu ma ghara ịgbafu mgbe m ‘ghagharịrị’ akụkụ nke akụkọ ahụ. Akwụkwọ akụkọ m mepụtara bụ maka ha, ebe ha maara etu weebụsaịtị m na ọdịnaya ya siri gosipụta afi iri tupu ngbanwe, na ọdịnaya e pelgalt maka obere otu a na – ejikọ ọnụịụịụọọchiechiechiechiechiechiechiechiechiechie eme. oburu na aghota ebe ha ei na mgbe ahu.
Ote n’ime ihe ndị just e ga-eji mepụta akwụkwọ ozi ọma, nke dị iche n’etiti ndị dị iche iche nke ndị na-ege gị ntị dabere na mkpa ha pụrụ iche bụ ihe dị mkpa. N’ezie, nke a bhe ihe na-emekarị n’ọtụtụ ọrụ nišš, dị ka golf.
Ndepụta ndepụta dị mkpa iji kwalite ngwaahịa / ọrụ dị iche iche nye ndị debanyere aha ha. ENECON bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe ndozi na ndozi nke na-edozi ọtụtụ nsogbu. Ebe ọ bụ na anyị na-azụ ahịa maka ụdị 30 dị iche iche na ndị ọrụ njedebe dị iche iche, ụlọ ọrụ ndị akọwapụtara na-ekewa ndepụta anyị iji mepụta ngwaahịaịịọọọọịkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Anyị agaghị ezigara ndị na-ahụ maka ịrụ ọrụ ụlọ ọrụ na-arụzi ụgbọ mmiri na-arụzi ụgbọ mmiri. Mgbe ọ bụla anyị bulite kọntaktị ọhụrụ na sistemụ email anyị, anyị ga-ekewa ha ụzọ isii dị iche iche. Kọntaktị email anyị na-enweta na igbe mbata ozi anyị ma ọ bụ ọ bụrụ na kọntaktị enweghị ngalaba ọrụ, anyị ga-edowe ya na listi izugbe. N’oge na-adịbeghị anya, anyị zipụrụ akwụkwọ akụkọ pụrụ iche na ndepụta email anyị niile na-enye nri ehihie na inye onyinye ma ọ bụrụ na ha na onye nnọchi anya nọdụ maka ngosipụta ngwaa. Anyị natara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmeghe site na e-posti aadress ma hazie ọtụtụ ngosipụta maka ndị ahịa anyị. Marketingzụ ahịa email na nkebi ndepụta bụ ngwaọrụ dị ike maka ụlọ ọrụ nwere ike iwepụta azụmahịa ọhụrụ.
Mgbe ụfọdụ ndị na-ede blomg na nišš gị ga-agbasa ozi na-ezighi ezi, mgbe ị na-eme ike gị niile iji nyere ndị na-agụ akwụkwọ aka site na ọdịnaya blogi gị, ị nwere ike ị ịchọrọ iji nweta ihe nke ọma na nišš gị.
Ote, kui see on Michael Martinez, kuid pole ka SEO, kuid pole eriti aktuaalne – $ 32 / denwa iji debanye aha gị na akwụkwọ akụkọ a ma na-agbanwe ya na ị ga – enweta ọdịnaya nke ụ na – ịnweta ebe ọzọ. (WHSRi Jerry Madal bụbu onye debanyere aha.)
N’adịghị ka ndị debanyere aha nadd na-ege ntị mgbe niile sitere na ọwa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ndị o yiri ka ha nwere ekele maka nkwupụta ọha, na ahụmịhe m na-agba ọsọ Robocity ụfọdụ ndị egwu na-eguzosi ike n’ihe na ndị debanyere aha egosighi mmasị n’igosi na blọọgụ m ma ọ bụ na ọwa m.
Ihe nzuzo nke akwukwo akuko edeputara enyere aka ime nke a. N’ezie, ọ bụrụ na ekpughere ọ bụla ma ọlị, ọ pelk sait na iji aha njirimara, ebe ezigbo aha ha na e-post ma ọ bụ adreesị weebụ ha ka bụrụ nke nzuzo. Enwere m ndị kọntaktị na-arịọ ka a ghara igosipụta aha ha ma ọ bụ email na nzuzo ha, ụfọdụ esonyeghị na nnọkọ nzuzo m guzobere iji mejupụta akwụkwọ akụkọ ahụ, ebe haw nuịịị ok ok ok ok m m m m m m m m m iso okwwọọ iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso iso Ndị ọzọ họọrọ isonye na otu akwụkwọ akụkọ naanị otu karịa na ndepụta izizi izizi maka nke a.
5. Saatke e-kiri na-enye mmekọrịta enyi
N’ezie, mak imetụtụ n’ime ndị m debanyere aha ha, email dị mma karịa foorumid n’ihi nkwa ahụ na akwụkwọ ozi ga-ezo na nzuzo, ka onye na-edebanye aha nwekwara ike ịza nchegbu ha n’ejighi jaa.
Nke a bụ eziokwu n’ozuzu maka ụdị ndị niile debanyere aha, mana ọ bụ ezie na ndị na-edebanye aha mgbe niile na-ekwukarị banyere iwepụta onye na-edeba aha m-naanị ọdịnaya, ndị na-edeban mma ma tinye aka na nkwurịta okwu, karịsịa na omimi ya.
Nicole Bermack, Edwardsturm.com’i peatoimetaja, kes on mastaabne, aga ei taha, et saaksite seda teha:
Ihe nkwuba anyi n’eme ngbako ime, kui CTR abanyela na 175% n’ime ime ihe a di nfe. Mee ka onye na-ede akwụkwọ akụkọ gị chọpụta aha onye ị na-ezigara ma jiri aha ahụ na mbido ozi ịntanetị ahụ. “Ndewo Nicole!” Bụ ezigbo enyi karịa “Ndewo, onye nwere ike ịdenye aha ndepụta m”. Nke a bụ ụzọ dị mma iji bulie CTR (pinye aka na naanetị) ma mee ka ndị debanyere aha ha hụ na ha hụrụ ha n’anya.
Ọ bụrụ na i mepụtara ala nnabata na ịchọrọ ka ndị debanyere aha gị pụrụ iche na-arụsi ọrụ ike ma na-ekwurịta okwu, ịchọrọ ịchọta dịka o kwere omume na ozi-e, ma nye ha im.
Ndị na-edebanye aha ndị Elite nwere ịnụ ọkụ n’obi maka ịbụ akụkụ nke obere ìgwè nke pụrụ iche na isi ihe m na-elekwasị anya. Ọ bụ ezie na nkwurịta okwu na-abụkarị otu n’ime m – ọtụtụ ndị kwadoro usoro ahụ – ụfọdụ n’ime ndị a na-egosikwa na hawe mmasị ịmata ibe ha site na ụlọ ọrụ nzuzo. Hụ okpuru:
Akwukwo ozi m nwere ngwongwo “nzipu ozi nzipu ozi +” ma mejuputara ya na nzuko nke onwe. Ejiri m GMANE tegi ngwanrọ ndepụta ndepụta, nke bịara n’efu na ngwọta cPanel m. Ndị otu niile sonyere ei olnud mmetụta na ha sonyere na obodo, ọtụtụ ihe ndị ọzọ na ndepụta karịa nzukọ a, n’ezie.
Ha nwere ezigbo mmasị na ozi ịntanetị m n’ihi na nke a bụ ọdịnaya niile anaghị m akpọsa na anaghị eso ndị mmadụ. Na mgbakwunye na nke a, m na-ekwe ka ndị debanyere aha m ụlọ ọrụ nwee mmetụta ọdịnaya m ruo na nzaghachi ha, ha na-eme ihe mgbe niile dị ka ndị na-agụ beeta (ọ bụrụ na ha dị njikere ime , sa lihtsalt ha na-enwekarị agụụ ịbanye na ọdịnaya ọhụrụ. .
Weegi ike ị k uomatakwuo, kui te pole saiti teada, nseta ihuenyo dị n’elu.
Ebe ụ bụ na ndị na-edebanye aha na ndị ọkacha mmasị nwere mmasị dị ukwuu na akụkọ nke akụkọ akụkọ m nọgidere na-aga n’ihu, ha na-achọsi ike ịhapụ nzaghachi dịmma banare ns.
Ndị Fännid teavad, et sa ei tea, mis on vaid hea, kuid mitte ainult n-ö, karịsịa nàgwà nke nzaghachi ha. Mgbe we nwetara nkwado dị otú sait n’aka ndị debanyere aha gị, àgwà ọdịnaya gị ga – ejidekwa – ị maara na ndị fänn a kwere na gị, n’ihi ya, ị ga – aza nzaghachi ha dị ka nnukwai na – agbanwe. Amaara m na ọ na-arụ ọrụ m.
Ọ bụrụ na ịmepụta listi ndị ọkachamara, jide n’aka na ịwere ọwa ndị ọzọ maka ndị debanyere aha gị iji hapụ nzaghachi – ọwa naanị otu aka dm mma, dị ka otu zụụụ Facebook ma, Facebook nchịkọta onwe dowka lihtsalt Robocity World Fännid.
Ma olen lihtsalt ichi akwukwo akwukwo akwukwo di iche iche abughi onye Elitist
Ka osi di, imeputa akwukwo ozi di elu maka ndi n’enwe otutu oge na ndi n’ekwe ntinye akwukwo nwere olile anya di iche abughi ihe a na – ele anya. Dịka mgbe ị ei olnud ezigbo ndị enyi – ndị maara ihe nzuzo gị – yana ndị enyi ndị ọzọ – ndị ị hụrụ n’anya mana ha enwetabeghị ntụkwasị obi zuru ezu ma ị maka ịkekọrịta obi.
Na-enye ndi mmadu ihe ha choro – na ufodi ndi mmadu aastat choo (ma kwesiri ya) karie n’ihi na ha kwadoro oru gi site na ubochi otu, ma obu nihi na hare odi iche di iche iche nke akwukwo ntuputa gi adighi adi.
Na MailChimp: ärge unustage, et teil on ikooni
MailChimp -enye njirimara nke esemokwu na otu maka ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ. Ka ha na-etinye ya, "esemokwu na ìgwè dhe iche iche na-eme ka ọ dị mfe iziga ndị nwere afwe ojuju ha-na naanị ọdịnaya ha na-eche."
Ma ei teadnud, et ga-esi na-esite n’akụkụ dị iche iche:
Ei, ei, ei, CG Boyce Real Estate Co., choro ụzọ mbu:
Mgbe ọ na-abịa n’ịmepụta ndenye n’ime listi, ka onye na-agụ ga-ekpebi i ndepụta a ga-agbakwunye. Kõik, mida te ei soovi, ei saa MailChimp’iga suhelda 700-aastaselt, kuid ei saa enam niikuinii nišše. Anyị g mgnyere mgbakwunye nke ndepụta nišš na isi ala anyị ma tinyezie otu akụkọ kwa izu site na ndepụta ahụ na "ịchọrọ ịgụ ihe dị ka nke a".
Olgu öeldud, Nathan Williams ja Crazy Eye Marketing on aidanud kõigile, kellel on järgmised andmed:
Ọ bụrụ na mmadụ pịa otu njikọ, anyị maara na ha dịkarịa ala nwere mmasị n’isiokwu ahụ, anyị nwere ike ịmalite ziga ọdịnaya ọzọ na otu isiokwu na / ma ọ bụ ịnwa ree ngwaaaụa.
Iji alias gị dee ndepụta MailChimp gị:
ỊỊ ikeikeikeikeikeikekekekekekekekekekekekekewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe weỊụ ụ Pịa bọtịnụ "Eelvaade" mgbe ịmechara nhọrọ niile dabara n’ọnọdụ gị (dịka ọmụmaatụ dị n’okpuru ebe a, ndị niile debanyere aha wee banye na listi mgbe 1. juuni 2016).
Uuendatud MailChimp Free Mail ei olnud sama kui ịhọrọ aka 5 ọnọdụ ma jiri isi ihe mgbagwoju anya.
Lee nkọwa ihu abụọ ab iji duzie gị:
Mgbe ụfọdụ, dịka na ahụmịhe m, weealgi ike ịchọ akụkụ yana njirisi na-etinyeghị na MailChimp – dịka ọmụmaatụ, ndị ọkpọkụ na akwadola nkwado web, ịịịịịịịịịịịị, ịị nịụịị ic ic Lisage andmed agbawunyere ‘n’okpuru kohta, kuna need on debanyere aha kama.
N’ọnọdụ ahụ, ịnwere ike ịmepụta otu kama ịmepụta otu, ma jiri aka tinye ndị debanyere aha n’okpuru otu ndị otu ọkachamara. N’ezie, uru nke Njikọ ahụ na MailChimp on siin ịchekwa ego na njikwa ndepụta.
N’ezie, ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ndepụta, ọ ga-aba uru karị inwe otu nnukwu ndepụta ma jide n’aka na ọ na-ejikwa ya site na iji otu na ngalaba. Ma lihtsalt bụ na n’ụzọ dị otú a, ị na-akwụ ụgwọ otu ugboro na adreesị ozi-e. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtde ndepụta dị iche iche, ma we nwere otu ndị ahụ [na] ma ndetu, ị na-akwụ ụgwọ ha ugboro abụọ.
Ọ bụrụ na akwụkwọ akụkọ gị gbagoro agbakwunyere ga-enwe naanị kọntaktị ole na ole (ihe na-erughị 100), ịnwere ike ịhọrọ nhazi onwe gke nke agaghị etinye gị nsogbu na ISP gị.
Dịka ọmụmaatụ, ndị ọkachamara Robocity na-eguzosi ike n’ihe na-agụnye ihe na-erughị ndị 50, ebe ọ bụ na ezigaghm m otu ọ bụla ma ọ bụ abụọ ozi ịntanetị n’ọubịụ, ọ dị na – esi na onye ọbịa m – n’eziokwu, M ji Thunderbird-naanị oge mbụ tupu ịkwaga GMANE, ọ dịghịkwa mgbe ọ bụla ọ na-akpata nzacha rämpspost, ọ dịghịkwa nsogan na onye na Ịnt.
Ụ bụ usoro dị mfe:
Edere m email ahụ ma zigara ya otu (ọ bụrụ na-eji onye ahịa email m, m ga-ahọrọ BBC ka ndị ọzọ zoro ezo ndị zoro ezo nye ndị nnata ahụ, ụ gwụla ma anyị wepụtara maka ozá nazi napi ipudị ole).
Ana m akwado gị ka ị jiri usoro a naanị ma ọ bụrụ na ndepụta gị dị obere, ụzọ dị ala karịa otu narị kọntaktị iji nọrọ na nchebe. Jah, MailChimp bụnhhrọ kachasị ọnịahịa we null – ọbụnakwa uudselt juba uus ndị debanyere aha 2000 – na ngwọta kachasị amasị m ugbu a.
Ndepụta njikwa na turgutav mmekọrịta bụ isi ihe na-agba ọsọ na-aga nke ọma, ma ọ bụ ọkwa. Atụmatụ ndụmọdụ abụọ a na – esonụ ga – enyere ndị na – agụ akwụkwọ gị aka na obi ụtọ.
Ära tee seda, kui sa ei tea, akwụkwọ akụkọ naanị; ị nwekwara ike iji nyiwe ndị ọzọ. Ndi akwukwo edere akwukwo bu ndi nkem Nkwalite DeviantART, ya, ikpo okwu bụ ebe kachasị mma maka m ịkọpụta ndị debanyere aha m, na mgbakwunye na ML / ala n’onwe ya na ebe ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ndepụta ndị ahụ dị elu ka ị nwekwara ike ire ahịa na ngwaahịa dị iche iche, lelee Lori Soard Ntinye akwụkwọ 4 iji gbanwee ndị debanyere aha gaa ahịa maabé mébé gée gée gée gée gée géae géae gée gée gé kae mébab oa gé kae.
Gbapụta ma ọ bụ na ọ bụghị, mine nwerela Nhazi Gị
Caitlin Bolnick VentureApp, kes on vaeva näinud, ei pea seda juhtima.
Ote n’ime akụkụ ndị kachasị njọ maka anyị na-ewu ụlọ ọrụ ndị ahịa anyị na ndị na-ede akwụkwọ akụkọ site na iji MailChimp. Ükskõik, mis on ndepụta nke ihe karịrị 10 000 ndị debanyere aha na ndị na-agụ akwụkwọ na-etinye ego karịa ndị ọzọ. Lee ụzọ abụọ a kapịrị ọnụ nke meworo ka enwewanye mmụba na oghere na ọnụ aka:
1. E-posti vaheaeg: ọ bụrụ na ndị ọrụ emepebeghị akwụkwọ akụkọ anyị na ọnwa 3 +, anyị na-eziga email nkewa iji meet ka ha mara na a ga-edebanye aha ha n’akwụkwọ akụkọ anyị.
Nke a na-ebuli elu ma ọ bụ na-emekarị ka ndị na-edebanye aha na-emeghachi omume. Ọtụtụ ndị ọrụ ga-aza ma rịọ ka ịnọ na ala. N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na enweghị mmeghachi omume ma ọ bụ akaebe na-agbaso email, anyị wepu aha onye ọrụ ahụ. Nke na-eme ka anyị nwee njikọ ọnụ na ọnụego na-emeghe ma na-enye anyhehere iherewas ilekwasị anya n’ịchọta ndị ọrọ na-emekọ ihe.
2. Ziga ozi ịntanetị ugboro abụọ Mgbe ụfọdụ: mgbe ụfọdụ anyị ga-ezitere anyị akwụkwọ akụkọ ugboro abụọ ma ọ bụrụ na anyị na-ahụ ala karịaenterye aka na nkịtị ma ọ bụ ọnụego. E-post on kõik, mida te ei saa, e-kiri, e-kiri, e-kiri, e-kiri, e-kiri, e-kiri, e-kiri, e-kiri, e-kiri, e-kiri, e-post, e-post Oge ụfọdụ, usoro isiokwu adịghị mma nwere ike imetụta ọnụego stereye aka na yabụ ọ dịkwa usoro nnwale bara uru. Ekwesịrị iji nke a mee ihe n’ụzọ na-adịghị mma ka ị chọghị ịkpasu ndị debanyere aha gị ma ọ bụ nke ka njọ, na-emebi ntụkwasị obi ha.
Lettermepụta akwụkwọ akụkọ dị oke mma bụ ezigbo echiche ma ọ bụrụ na ịwere otu ndị na – eme ihe nkiri, ndị ahịa, ndị na – akwado ma ọ bụ ndị ọrụ na-enwgọịọụụụụụụụụịịị. Emepụta otu naanị ka ị nwee inwe ndị pụrụ iche nke ndị debanyere aha ma ọ bụrụ na e nwghhe ihe zuru oke iji kọọ ndị na-ege gị ntị ma ọ bụ na ịnweghị oge ige ji lejijijidedededede iwulite mmekọrịta bụ ntọala dị mkpa maka akwụkwọ akụkọ kachasị mma. , ma ei ole kunagi olnud ọzọ ị ga – enye ọfụma ịnye oke uru ọ ga – apụkwa iche site na akwụkwọ akụkọ mgbe ochie.